November 26, 2020 Farah Abdulkadir Mohamed 0
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa kulan gaar ah maanta la yeeshay xubnaha golaha Wakiilada (Baarlamaanka) oo ay uga hadlayen arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, si gaar ahna diiradda loo saaray arrimaha hadda taagan iyo Qaabka doorashadu ay ku qabsoomay.
Inkasta oo aan kulankan warbaahinta door laga siinin, haddana Warsidaha PuntlandTimes ayaa helay macluumaad ku saabsan waxyaabaha uu ka hadlay Madaxweyne Deni, ee kusaleysan arrinta doorashada Federaalka ee hadda taagan.
Qaar kamid ah ka qeybgalayaasha shirka ayaa noo xaqiijiyey in Madaxweyne Deni uu sheegay in geedi socodka doorashooyinka uu meel wanaagsan marayo, isagoo sheegay in dhawaan ay Puntland magacaabi doonto xubnaha guddiga Doorashooyinka ee laga sugayo, taasna ay qeyb ka tahay hanaanka geedi socodka.
Madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in ay Puntland si adag uga soo shaqeysay doorashada iyo nooceeda in heshiis laga gaaro, haddana ay wali aragto in si wanaagsan ay wax ku socdaan, wuxuuna sheegay in uu dareemeyn cabsida ay dad badan muujinayaan xiligan.
M/weyne Deni ayaa u sheegay xubnaha Baarlamaanka in ay Puntland door adag ka qaadatay in doorashada nooceeda lacadeeyo, lana sameeyo Habraacyo heshiis lagu yahay, kuwaas oo uu sheegay in ay guddiyada lagu magacaabay, laakiin wuxuu sheegay in cid kasta ka caban karto wixii la sameeyo. tannina ayba siyaasad tahay.
Mr, Deni oo la weydiiyey tabashada musharaxiinta hadda kulamada yeeshay, warkana soo saaray ayuu sheegay in uusan garaneyn wax weyn oo cabsi ah, balse Siyaasi kasta oo damac leh wax badan ay sheegayaan siyaasiintu, wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey in dalka ay waqtigeeda uga dhacdo doorashadu marka la gaaro Feb 2021-ka.
Xildhibaanada qaarkood oo su`aalo weydiiyey Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayuu sheegay in ay wadatashi ka yeelan doonaan taageerada Puntland ee doorashada iyo musharaxiintaba, mar la weydiiyey aragtida ku wajahan musharaxiin in la taageero ama ay Puntland dirsato cid uga qeybgasha doorashadan.
Madaxweynaha Puntland ayaa kasoo laabtay safaro uu ku tagay dalalka Kenya, Itoobiya & Imaaraatka Carabta, waxaana qabsoomida kulankan ay kusoo beegmaysaa xili shalay galab uu dib ugu laabtay Garoowe, isagoo bilaabay latashiyo kala duwan, ka dibna ay wararku sheegayaan in uu tagayo caasumada Soomaaliya.